အကြမ်းဖက် သမား မွတ်စလင်မ် မဟုတ်​ဟု အမီရ်ခါးန် ပြောပြီ | Danya Wadi
Browsing: » Home »သတင်းများ»အကြမ်းဖက် သမား မွတ်စလင်မ် မဟုတ်​ဟု အမီရ်ခါးန် ပြောပြီ	Leaveacomment
အကြမ်းဖက် သမား မွတ်စလင်မ် မဟုတ်​ဟု အမီရ်ခါးန် ပြောပြီ	Posted by danyawadi on May 17, 2016 in သတင်းများ, အစ္စလာမ်ဘာသာ	ကမ္ဘာ့သမိုင်းစားမျက်နှာပေါ်မှာအကြမ်းဖက်သမားဟာ မွတ်စလင်မ်တွေမရှိခဲ့ကြောင်းကို အမီရ်ခါးန်ပြောပြီ
သူကခရစ်ယာန်ဒါပေမယ့် ဘယ်မီဒီယာမှ သူ့ကို ခရစ်ယာန် အကြမ်းဖက်သမားလို့မခေါ်ဘူး။
၂။ Ĵoseph Stalin (အန်ကယ်လ် Ĵoe )လူသန်း ပေါင်း ၂၀ ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။
၁၄့၅ သန်း အစာအငတ်ထားပြီး သတ်ဖြတ်ခဲ့ တယ်။
၃။ မော်စီတုန်း ( တရုတ်) ၁၄ သန်းကနေ သန်း ၂၀. အထိ သတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
၄။ မူဆိုလီနီ ( အီတလီ) လူ၄၀၀၀၀၀ (၄သိန်း) သတ်ဖြတ်ခဲ့ တယ်။
၅။ Ashoka. အသောကမင်း (အိန္ဒိယ) လူ ၁၀၀၀၀၀ (၁ သိန်း) သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။
၆။ George Bush စေလွှတ်ခဲ့တဲ့ Iraq က စစ်တပ် (USA) အပြစ်မဲ့ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးငယ် ၅သိန်း သတ်ဖြတ်ခဲ့ရ။
စဉ်းစားကြည့်ပါ ကမ္ဘာ့သမိုင်းရဲ့ အဓိက လူသတ် သမား တွေ ဖြစ်တယ်။
ဘယ်မီဒီယာက သူတို့ကို Terrorist လို့ခေါ်
ကြ လည်း အဲ့ဒီ လူသတ်သမားတွေက Muslimတွေလား။ မဟုတပါဘူး။ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း လူသတ်သမားအားလုံး Non-Muslimတွေပါ။
တချို့ဆိုင်ရင် Anti-Muslim ပါ။
Îslamကို Terrorism (အကြမ်းဖက်ဝါဒ) လို့တစ်ဖက် သတ်ပြောမယ်ဆိုရင် ပြောတဲ့သူဟာ မိမိ ကိုယ်ကို သဘော ထားသေးသိမ်သူ ပညာဗဟုသုတ နည်းပါးသူလို့ ဝန်ခံလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ပထမ ကမ္ဘာစစ် လူဦးရေ ၁၇သန်း သေဆုံးခဲ့တယ်။
Muslim မဟုတ်တဲ့ လူတွေကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်
၂။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် လူဦးရေ သန်း ၅၀ ကနေ ၅၅သန်း အထိသေဆုံးခဲ့တယ်။
ဒါလည်း Muslim မဟုတ်တဲ့ လူတွေကြောင့် ဖြစ်
၃။ ဂျပန်နိုင်ငံ Hiroshima(ဟီရိုရှီးမား) နဲ့ Nagasaki (နာဂါဆာကီ) မှာ ကျခဲ့တဲ့ Atomic Bomb လူဦးရေ၂၀၀၀၀၀ (၂သိန်း) သေဆုံးခဲ့ တယ်။ဒါလည်း Muslim မဟုတ်တဲ့ လူတွေ ကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။
၄။ Vietnam စစ်ပွဲ လူ ၅ သန်း ကျော် သေဆုံးခဲ့တယ်။
ဒါလည်း Muslim မဟုတ်တဲ့ လူတွေကြောင့် ဖြစ်ပွား ခဲ့တယ်။
၅။Bosnia / Kosovo စစ်ပွဲလူ၅သိန်းကျော် သေဆုံး ခဲ့တယ်။ ဒါလည်း Muslim မဟုတ်ပါဘူး။
မဟုတ် တဲ့ လူတွေကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။
၆။ Iraqမှာဖြစ်တဲ့ မတရား Genocide (လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှု) လူကြီး လူငယ် ကလေးမွေးကင်းစ စုစုပေါင်း ၁၂ သန်း ကျော် အသတ်ခံခဲ့ရတယ်။ဒါလည်း Muslim မဟုတ်တဲ့ လူတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်း လူသတ်ပွဲလူသတ်တရားခံ အားလုံးကမွတ်စ်လင်မ် မဟုတ်ပါဘူး။
အကြမ်းဖက်အတွေးခေါ်. နှိနင်းရေးနှင့်လက် တွေ့ ဆန်သော ငြိမ်းချမ်းရေး ဘဝတည်ဆောက် ရေးဆိုင်ရာ အခမ်းအနားတွင် အမီရ်ခါးန်ပြောခဲ့ သောစကားများကိုသာကူးယူဖေါ်ပြခြင်း ဖြစ်ပါဘည်
← ဖေ့စ်ဘုတ် သုံးစွဲသူတွေ ဥပဒေ အသိပညာ လေ့လာ သုံးစွဲဖို့ အသိပေး	မြန်မာ – ဘင်္ဂလား နှစ်နိုင်ငံစလုံးတွင် ​ရခိုင်​ က တိုင်းရင်း သား →